The National Round Table on the Implementation of United Nations Security Council Resolution 1540(2004) was held in Nay Pyi Taw – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
The National Round Table on the Implementation of United Nations Security Council Resolution 1540(2004) which addresses the proliferation of Weapons of Mass Destruction was held at Park Royal Hotel, Nay Pyi Taw from 19 to 20 January, 2016. It was jointly organized by the Republic of the Union of Myanmar and the United Nations.
A Representative from United Nations office for Disarmament Affairs (UNODA), Experts from the committee Established Pursuant to Security Council Resolution 1540 (2004), Interim Director from UN Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific (UNRCPD) and high level officials from the Ministry of Defence, the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Immigration and Population, the Ministry of Industry, the Ministry of Commerce, the Ministry of Health, the Ministry of Finance, the Ministry of Science and Technology, and the Union Attorney-General’s Office actively participated in the Round Table Discussion.
Brigadier General Ko Ko Lwin, Office of the Commander-in-Chief (Army), U Htin Lynn, Director-General, International Organizations and Economic Department, Ministry of Foreign Affairs, Mr. Yuriy Kryvonos, Interim Director of UNRCPD and Ms. Xiaodong Lv, Expert from the committee Established Pursuant to Security Council Resolution 1540 (2004) delivered opening statements.
အဖျက်စွမ်းအား ကြီးမားသော လက်နက်များ ပြန့်ပွားမှုမှ တားဆီးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် (၁၅၄၀) အကောင်အထည်ဖော်ရေး စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကုလသမဂ္ဂတို့ ပူးပေါင်း၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့မှ ၂၀ ရက်အထိ နေပြည်တော်ရှိ Park Royal ဟိုတယ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲကို ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် (၁၅၄၀) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီအဖွဲ့မှ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ကုလသမဂ္ဂ အာရှ ပစိဖိတ်ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင်‌့ လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေး စင်တာမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်အရာရှိကြီးများနှင်‌့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြသည်။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း) မှ ဗိုလ်မှူးချုပ် ကိုကိုလွင်၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီးပွားရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးထင်လင်း၊ ကုလသမဂ္ဂ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင်‌့ လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေး စင်တာမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး မစ္စတာ ယူရီခရီဗိုနော့၊ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ၁၅၄၀ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ ကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင် မစ္စ ဇင်ဒေါင်လု တို့က အဖွင်‌့အမှာစကား အသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြပြီးနောက် တက်ရောက်လာကြသူများက အပြန် အလှန် ဆွေးနွေးကြပါသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်